Nidaamka tareenka labaad ee Antalya wuxuu dhameystiray maalinta 150 (Video) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaTurka marxaladaha marxaladaha marxaladda labaad ee Antalya ayaa lagu dhammeystirey maalmaha 150 (Video)
04 / 04 / 2016 07 Antalya, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka, VIDEO
Nidaamka tareenka ee heerka labaad ee Antalya ee 150 ayaa la soo gabagabeeyey maalin: Wasiirka Yıldır saidm wuxuu yiri, N Antalya 2 nidaamka tareenka heerkiisa ayaa lagu dhammeeyay waqti aan horay loo arag adduunka. Mashruucan oo qandaraaskiisu yahay 450 maalmood wuxuu ku dhammaaday maalmaha 150 ”
ExPO 2016 Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Binali Yildirim, oo baaray dhismaha wadada iyo nidaamka tareenka ayaa ushaqeynaya deegaanka Antalya, wuxuu yiri, “Nidaamka tareenka Antalya 2 marxaladiisi wuxuu ku dhamaaday waqti aan horay loo arag aduunka. Mashruucan, oo qandaraaskiisu yahay maalmo 450, ayaa lagu dhammeeyaa maalmaha 150.
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Binali Yildirim ayaa ku soo dhoweeyay gudoomiyaha Antalya Muammer Turker, wakiilada AK Party iyo xafiisyada xafiisyada garoonka Antalya. Iyada oo wajahaysa kalgacalka aadka u weyn ee dhalinyarada ka timid Xisbiga AK Party, Yildirim ayaa warbixin kooban ka helay Xarunta 6 ee Gobolka ee Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta gudaha garoonka diyaaradaha, kaasoo socday ku dhawaad ​​saacadaha 1. Wasiirka Yıldırım iyo wafdigiisa waxay baari jireen howlihii taraafikada iyo isgoysyada oo ka kala yimid bartamaha magaalada illaa aagga ExPO 2016 Antalya.
Agaasimaha Guud ee Wadooyinka İsmail Kartal iyo Maareeyaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha Fatih Turan ayaa helay macluumaad ku saabsan shaqada Wasiirka Yıldırım, Isgoyska Dimuqraadiyadda illaa Isgoyska Square, nidaamka taraamka ee fadhiya kuraasta kursiga taraamka taraafikada ayaa sameeyay. Wadada tijaabada ee kiloomitir 6, ka dibna wuxuu sameeyay bayaan Wasiirka Binali Yildirim, nidaamka tareenka EXPO 2016 Antalya ee furitaanka taariikhda si loo qabto Abril 22 wuxuu sheegay in dhammaan wasaaradaha ay abaabuleen. Wasiirka Yıldırım wuxuu caddeeyey inay goaansadeen inay ku ballaariyaan nidaamka tareenka inta u dhaxaysa Fatih-Otogar-Meydan aagga EXPO ka hor shir-madaxeedka G20, wuxuuna yidhi; Waxa ay noqon doontaa. Intaa waxa u dheer, waddooyin isgoysyada badan oo jidadkeenna weyn ayaa isla furi doona. Dhanka kale, howlo badan oo ka socda degmadeena waaween ayaa si wada jir ah loo furi doonaa.
22 waxaa la adeegsan doonaa bisha Abriil, qeybta koowaad ee khadka tilmaamaya inay bilaabeen shaqada tijaabada Hillaac, Antalya 2'nci nidaamka tareenka nidaamka dhammeystiran waqti gaar ah oo adduunka ah, ayuu yidhi. Wasiir Yildirim ayaa tilmaamay in mashruucan, oo loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo sanadka 1.5 oo qandaraaskiisuna uu yahay maalinta 450, in lagu dhammeyn doono maalinta 150, “Mashruuca waxaa la sameeyay 3 Xilliga 1. Tani waa mucjiso, mashruucan oo waqti yar gudahiisa ah si loo xaqiijiyo halka ay ku taallo Wasaaradda Gaadiidka Agaasinka Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha iyo shaqaalaha isla mar ahaantaana Duqa Magaalada Antalya Menderes Türel iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda Mevlüt Çavuşoğlu iyo wakiillada Antalya waxay leeyihiin dabagal aad u weyn iyo tabaruc. Waxaa jira koox wax soo saareysa oo ah dadka 24 oo ka shaqeynaya qadkaan saacadaha 750 saac habeen iyo maalinba. Waxaan u mahadcelineynaa injineerada qandaraasleyda, farsamayaqaannada iyo shaqaalaha. Waxa jiray dhibaatooyin qaar muddadii shaqadan muhiimka ahayd ay soo bixi lahayd. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan farshaxanimada Antalya iyo dadka samirkooda. ”
Nidaamka tareenka xNUMX kilomitir, qiimaha 19 milyan ee TL, ayaa yiri Hillaac, ayaa yiri:
“Arintan, isgoysyada ay sameyaan jidadka waa 300 million TL. Iibsashada gawaarida ay sameysay dowladda hoose ee 100 million TL. Inta lagu gudajiray, shaqooyinka dhirta iyo muuqaalka dhirta, 150 million TL. Sidaa darteed, waxaan sameynay maalgashi 5 milyan TL bishii 900. Dawlada hoose waxay tusaale u tahay wadashaqeynta wanaagsan ee ka dhaxaysa degmada iyo wasaarada dawlada dhexe. ”
Isagoo xusuusinaya in dhismaha buundada la dul dhigay Wasiirka Yildirim, Istanbul, Urla dhamaadka sanadkan, wuxuu yiri waaxdu waxay gali doontaa adeegga.
MAAMULKA KOWAAD 4.5 MILLION
Hawlwadeennada GSM 1 4.5G bishii Abriil, adeegga ay bixiyaan maalinta ugu horreysa ee macaamiisha 4.5 milyan ee macaamiisha ah waxaa adeegsanaya Wasiirka Yildirim, “Citizen wuu jeclaa. Laakiin maalintii ugu horraysay ee aan u sheegay xawaaraha taraafikada ee waddadu waa musiibo, xawaaraha xagga warfaafinta ayaa ah barako. Barakeysan laakiin xawaare badan ayaa ah lacag badan. Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad ku qabataa shaqada 1 ilbidhiqsiyo. Waa caadi haddii aad isticmaaleyso ilbidhiqsiyo 6 laakiin haddii aad tiraahdo waxaan adeegsan doonaa 6 daqiiqadood xawaaraha tani waa shaqada aad ogaan doonto.
Wasiir Binali Yildirim iyo kuwii la socday waxay u tageen casho. La kulanka Madaxweynaha Xiriirka Isboortiga Fatih Cintimar iyo Wasiirka Yildirim oo kula kulmay ciyaartooyda ciyaartooyda 'guul' ayaa rajeeyay.
Nidaamka tareemada ee Aksu-Aksu waa god labaad oo madow ee magaalada Antalya
150 Kumanaan Moved Maalinta Nadaafadda waxay aad muhiim ugu tahay IZBAN
Antalya qadka nidaamka wadada tareenka labaad
Imtixaanka ugu horeeya ee nidaamka tareenada ee EXPO ka soo
Wuxuu halis geliyay noloshiisa si looga fogaado in uu ku dhaco jirrooyinka metrobus (Video)